Ahoana ny fomba hanaovana ny mandala?
Mandala dia iray amin'ireo safidy ho an'ny fisaintsainana, izay ahafahanao mahita ny firindranao ao anatinao. Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba fanaovana ny mandala amin'ny tenanao manokana mba hahatratrarana io tanjona io. Maro ny sary natao ho an'ny tanjona samihafa, saingy amin'ny ankapobeny, dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-panahy izy ireo.
Eo am-pandinihina ny fizotran'ny fanoratana dia te-hanome toro-hevitra aho - mifantoha foana amin'ny ivon'ny mandala , izay ho karazana fitsikerana izay azonao averina.
Ahoana ny fomba fanaovana ny dingana mandalo amin'ny dingana:
Raha tsy misy pentina, dia eo amin'ny taratasy kely fotsiny dia manasongadina faribolana iray amin'ny fampiasana kôpà na zavatra misy manodidina.
Mamaritra ny foibe, izay ahazoana tsipika roa: mivadika sy mivelatra. Ny fifangarohan'ireo andalana ireo dia ny foibe.
Raha miresaka momba ny fomba hanamboarana mandala ho fahatanterahan'ny faniriana sy ho an'ny tanjona hafa, dia ilaina ny manamarika fa tsy maintsy mifanintona io tarehimarika io. Mba hanaovana izany dia afaka manamboatra môdarka ianao amin'ny fizaranao azy any amin'ny sehatra maro, izay ahafahanao mizara marina ny ampahany.
Mianara endrika kely, eo amin'ny foibe, ohatra, rhombus, boribory, kintana na kianja iray. Avy eo dia asio tarehimarika manaraka ny manodidina ny tarehimarika vokarina, sns. Tsarovy ny sainam-panahy. Ampiasao ireo loko tianao, raha te hanintona motifs ianao, fa tadidio fa ny alok'izy tsirairay dia manana dikany manokana. Ataovy izay rehetra tianao, mifantoha amin'ny fanandramanao sy ny sainao.
Mba hananganana mandala ho fanangonana vola, vintana ary ho an'ny tanjona hafa dia azonao atao ny mametraka ireo sary eo amin'ny andaniny, izay hahazo ny vokatra voalohany. Azonao ampiana sary efa vita. Amin'ny ankapobeny, mandra-pahitanao fa efa vonona ny mandala ary tsy misy zavatra hafa hanampiana azy.
Ny fanaovana sary dia azo atao amin'ny pensilihazo, ary avy eo dia manonta azy amin'ny kapila iray mba hanana ny modely tsy manam-paharoa, izay azo hosoloina amin'ny fotoana rehetra, izany hoe hitarika fisaintsainana.
Vato topaz manga - toetra mahagaga
Tattoo Ladybug - Sarobidy
Pentagram an'ny devoly
Ahoana ny fanokafana ny elefanta?
Ny herin'ny vehivavy - ahoana no hampivelatra sy hamoha?
Tattoo-sangisangy sy ny dikany
Ahoana ny fomba hampihenana ny fifandraisana amin'ny angovo amin'ny mpiara-miasa taloha?
Famantarana ny vehivavy sy lehilahy
Mantra izay manasitrana ny aretina rehetra
Ny hematite vato - ny fanasitranana sy ny majikika
Tattoo Wolf - ny dikany
Ny Hall of the Swan
Fahotana mahafaty - ny fahotana mahatsiravina ao amin'ny ortodoksia
Yarrow: toetra mahasoa
Hividy kiraro ao amin'ny lafaoro
Kianjan'ny Repoblika (Podgorica)
Visa ho any Letonia ho an'ny Rosiana
Famokarana karazana voatabia
Marika tamin'ny 8 Oktobra
Masketsa ho an'ny volom-bolo
Gloves amin'ny hoditra
Jeans maoderina - lohataona-lohataona 2016
Soup tsy misy potika
Lahatsary fanaraha-maso miaraka amin'ny sensor sensor sy ny fandraisam-peo
Kamiao ao amin'ny trano
Fandrobana amin'ny fitondrana vohoka
Fanampiana - labozia avy amin'ny hemorrhoids